खोइ युवामैत्री योजना र व्यवहार ? - Bidur Khabar
खोइ युवामैत्री योजना र व्यवहार ?
विदुर खबर २०७६ साउन २७ गते १७:३२
तर पत्रको आसयले रेडियो नाटक सुनेपछि विदेश जाने सपना त्यागेर स्वदेशमा केही गर्न तत्पर रहेको बताउँथ्यो। करिब छ महिनापछि प्रभावमापनको बारेमा सोही पाठकसँग कुरा गर्ने कोसिस गरियो। यसको लागि त्यो पत्रमै उल्लेख मोबाइल नम्बरमार्फत सम्पर्क गरियो। अफसोस, फोन संवाद गर्दा स्रोताको उत्साह मरिसकेको पाइयो। उनले निराश हुँदै भनेका थिए– ‘मैले थातथलोमै केही गर्ने प्रयास गरेँ तर कतैबाट सहयोग पाइनँ। अब फेरि विदेश नै जाने मनस्थितिमा छु।’